Yaa loo magacabay maamulka Barawe |
Yaa loo magacabay maamulka Barawe
Viagra Professional online, buy Zoloft online.
Arrinta duullaanka ee lagu qabsaday Degmada Baraawe, ayaa waxaa faah-faahiyay Shaacir Aadan Cilmi oo ah Guddoomiyaha Maamulka Dowladda ee Degmadda Baraawe,wuxuuna xusay inay dagaal la’aan saakayto ku galeen gudaha Baraawe.
Sidoo kale, waxa uu Guddoomiyaha Tilmaamay in Ciidamada DF iyo kuwa AMISOM aysan dhaqdhaqaaqyo Milliteri bilaabi doonin inta lagu guda-jiro Maalmaha Ciidul-adxa, wuxuuse xusay in ciidda kadib ay bilaabi doonaan Hawlgalkooda ka dhanka ah Alshabaab, waa sida uu hadalka u yiri.
Waxa uu Tilmaamay in Baraawe kadib ay soo hartay Laba Degmo oo kaliya oo ay ku harsanaan doonaan Xoogaga Alshabaab, waxa uuna shaaciyay in weerarka xiga ay ku qaadi doonaan Deegaano ay kamid tahay Aadan Yabaal.
Dhanka kale, Dadka ku xeel-dheer duullaanada Militeri, ayaa qaba inay Dagaalyahannadda Alshabaab lumiyeen magaallo Istaraatijiyad leh oo ay hubka kala soo degi jireen, isla markaana ay ka dhoofin jireen shixnadaha dhuxusha oo la sheego inay Malaayiin Dollar uga soo xerooto sannadkiiba.
Degmada Baraawe oo ku taalla dhul-xeebeed Istaraatijiyad leh ayaa waxaa dhowrkii sanno ee la soo dhaafay gacanta ku hayey Maamulka Alshabaab, waxayna Baraawe saldhig dhexe u ahayd Taliska Sare ee Hoggaanka Alshabaab, gaar ahaan Amiirkii Alshabaab iyo Hogaanada ku xiran.